Phuket Town ~ Journey-Assist - Mahaliana ao Phuket
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Phuket » Phuket Town
Famaritana ny tanàna Phuket any Phuket. Vidin-javatra.
Phuket Town amin'ny sari-tany. Ahoana no hahatongavana any.
Saripika sy horonan-tsary any Phuket Town
Mahaliana ao amin'ny tanàna Phuket
Famerenana ao amin'ny tanàna Phuket (Tripadvisor.com)
Tanàna Phuket dia tanàna iray azo raisina ho marim-pototra tena ara-dalàna kokoa noho ny trano fandraisam-bahiny. Betsaka ny valan-javaboary, kianja kely, tempolin'i Thai, zavatra hafa mahaliana ny maritrano, tranombakoka.
Miaraka amin'ny ambaratonga mahazatra, Phuket dia mizara ho faritra vaovao sy vaovao. Ara-dalàna ny fizarazarana ity noho ny antony izay ao Phuket tsy misy fanavahana mazava eo amin'ny trano vaovao sy taloha. Efitra taloha, misy lalambe marevaka tery, mifanila amin'ny trano maoderina, salon, magazay hita eny amin'ny arabe midadasika.
Ny tena mahaliana ho an'ny vahiny dia Old Phuket. Izy io dia ampahefatry ny làlana maromaro - Thalang, Krabi, Phang Nga, Dibuk, Ratsada, ary lalana kely vitsivitsy. Old Phuket dia naorina miaraka amina tranobe misy rihana roa sy betsaka, amin'ny fomba Sino-portogey. Mampikambana ny kolontsaina sinoa sy tandrefana izy ireo. Maro ny tranobe eto no hoso-doko amin'ny loko marevaka, noho ny fahitan'ny Old Phuket kokoa.
Ao amin'ny rihana voalohany an'ny Old Phuket dia misy fivarotana souvenir, fivarotana, atrikasa, kafe miaraka amin'ny lovia Thai sy Eropeana. Eo amin'ny lafin'ny tranobe maro mirenireny zava-kanto an-dalambe.
Tonga any Phuket Town amin'ny alàlan'ny fiara fitateram-bahoaka avy any Fr. Phuket dia na avy amin'ny moron-tsiraka amin'ity nosy ity. Avy any amin'ny toerana rehetra ao Phuket dia afaka miditra any Phuket Town amin'ny bisikileta / fiara manofa. Ny fomba haingana indrindra dia ny fandefasana famindrana olona tsirairay.
Phuket Town amin'ny sari-tany
Phuket Town. Sary sy horonan-tsary
Ao ihany koa ny tempoly kely vitsivitsy, misy ny lalan-kely kely. Fa mbola manintona olona indrindra ny tanànan'i Phuket no foiben'ny tanàna taloha. Jereo ny sary dia ho azonao ny zava-drehetra :). Afaka mandehandeha fotsiny ianao, mankafy ny endrika hafahafa amin'ny trano tsy mahazatra, nolovan'i Thailand nanomboka tamin'ny andro nijanonan'ny portogey mavitrika teto.
Tanàna mahaliana. Manjary loko amin'ny fomba eoropeana. Ary tsy lavitra ny tanàna Phuket, afaka mitsidika ny Ala Monkey. Azonao atao ny mamahanana ny gidro, nefa tsara kokoa ny mividy akondro ho azy ireo mialoha, satria ny akondro mihitsy aza dia lafo be ny vidiny. Ny gidro dia tsy mahery setra, fa toetra)
Ekeko tanteraka. Ilaina ny tanàna! maritrano tsara tarehy, trano miloko marefo, mponina mahafinaritra ..
Ary eny .. ny tendrombohitry ny gidro etsy akaiky dia mahaliana ao anatiny, ary manome fomba fijery mahafinaritra amin'ity tanàna ity